ဝက်သားတုတ်ထိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ၀က်သားတုတ်ထိုး
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Aug 12, 2011 in Food, Drink & Recipes | 27 comments
ဝက်သားတုတ်ထိုးစားချင်တဲ့ အချိန်တိုင်းအာသီသ ရှိနေတာကြာပါပြီ ။
အချိန်တိုင်း ဒီအကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေမိတာ ရှေ့ ရေးစီးပွားရေးအတွက်ပါ။
ဝက်သားတုတ်ထိုးက မန္တလေးမှာ စားရတာနဲ့ ရန်ကုန်မှာ စားရတာ မတူလှဘူး။
မန္တလေးက အဓိက အသားကို ပြုတ်ထားတာဆိုတော့ အသားက ပျော့တယ်။
တုတ်နဲ့ ထိုးထားတာတင် မဟုတ်ပဲ ပွဲနဲ့ လဲစားလို့ ရတယ်။
ပွဲနဲ့ ကြတော့ အသားပြုတ်တဲ့အရည်ရောပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ငရုတ်သီး ကို ပါးပါးလှီးထည့်၊
ငရုတ်သီးဆော့ရယ် သံပုရာသီးညှစ်ပြီး စားကြတယ်။
တုတ်နဲ့ ထိုးထားတာကြတော့ မန္တလေးမှာ အကင်လို့ ခေါ်တယ်။
ပြီးတော့ အသား၊အူနဲ့ အဆုတ်ကို မီးအေးအေးလေးနဲ့ ကြွတ်နေအောင်
ကြော်ထားတဲ့ အကြွတ်ကြော်ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကြတော့ ဝက်ပြုတ်ရေကို သံပုရာသီးညှစ်ပြီးသောက်ပေါ့။
ရန်ကုန်မှာ တုတ်ထိုးစားတော့ ခေါက်ဆွဲကြော်ကြာဇံကြောနဲ့ လည်းရောစားပါတယ်။
်ရန်ကုန်ဆိုင်တွေအားလုံးထဲ မှာတော့ဒီဆိုင်တွေ ကအကောင်းဆုံးပါဘဲ..။
လမ်းမတော်သံဈေးရှေ့ က မငယ်ဆိုင်.
၁၃ လမ်းကမောင်မြင့်ဆိုင်လည်း အရမ်းစားကောင်းပါတယ်။
အင်းလျားရေကူးကန်ဘေး က တုတ်ထိုးဆိုင်
၀ါးတန်းလမ်းလူပျိုကြီးဥိးချစ်တုတ်ထိုးဆိုင် (စိတ်တိုင်းကျလက်ဘက်ရည်ဆိုင်နဲ့ ပန်ဒါဟော်တယ်ကြားက)
စမ်းချောင်း ပဒုမ္မာကွင်း La Belle ရှေ့  က ၀က်သားတုတ်ထိုး…ဒီဆိုင်များကတော့ ကျမ………..
ကျောင်းသူဘ၀တုန်းက တုတ်လေးနဲ့ ထိုးပြီးစားရတာ အရမ်းသဘောကျတာပဲ(တုတ်လည်းမပစ်ချတတ်၊ မချိုးတတ်ပါ)
မှတ်မှတ်ယယ တုတ်ထိုးစားတာအပြန် ကားစီးဖို့ ဘဲချန်ပြီးစားဘူးပါတယ်..။
လမ်းမှာ ရန်ကင်းနားကားပျက်လို့နောက်ကားစီးဖို့ ငွေကပါမလာပါဘူး…စပယ်ယာကလည်း လူလည်ပါ…စက်ပြင်ဆရာသွားခေါ်အုံးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအကြာကြီးပါ…။
မစောင့်နိုင်လို့ ..ရန်ကင်းကကျောက်မြောင်းအထိလမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ ဘူးပါတယ်)
ရန်ကုန်မှာကျ အသားကို နည်းနည်းပြန်ကြော်ပါတယ်။
မိမိနှစ်သက်ရာ ဝက်သားကလီစာများကို ရွေးဝယ်ထားပါ။
ဝက်အသည်း၊နှလုံး၊လျှာ ၊အူချို ၊အူပိတ် သွေးခဲ၊ အသား၊ တစ်ပိသာ
နာနတ်ပွင့် ၅ ပွင့်
ဝက်အသည်း၊နှလုံး၊လျှာ ၊အူချို ၊အူပိတ် သွေးခဲ၊ အသား တို့ ကို ရေသေချာဆေးပါ။
တို့ ဖြင့် နှံအောင်ဆုတ်နယ်ပေးပါ။ ထို့ နောက် အသားများကို ပြုတ်ပေးပါ။
ပေါင်းအိုးနဲ့ ပေါင်းပေးရင် အရသာပိုကောင်းပါတယ်။
အသားပြုတ်အိုးထဲကို ဂျင်းအချောင်းလေးတွေလှီးပြီး ထည့်ပေးပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ ၊ငရုတ်သီးစိမ်းလှီးထည့် သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး ပြင်ဆင်ပါ။
အရည်လေးနဲ့ စားမယ်ဆို မိမိနှစ်သက်ရာအပိုင်းကို ပါးပါးလှီး၊
အရည်ဆမ်း၊အချဉ်ထည့် ပြီး စားသုံးပါ။
ထမင်းနဲ့ စားမှာမလို့ ဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်နီ၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ငရုတ်သီးစိမ်း
ပဲပင်ပေါက်ရေနွေးဖျောပြီး သခွားသီးနဲ့ မုန်လာဥနီကိုအချောင်းလေးတွေ လှီးပေးပါ။
အသားနဲ့ ရောပြီး ငံပြာရည်တို့ နဲ့ သုတ်စားပါ။
အသားကို ကြော်ပြီးမှစားချင်သူများအတွက် အသားကို ဆီမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ကြော်ပါ။
ဒါဆိုရင် အရမ်းစားကောင်းတဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးရပါပြီနော်။ စာပြီးရင်ဆွေမျိုးပါမေ့ နိုင်လို့ အရင် ဆွေမျိုးစာရင်းစမှတ်ပါ
ကဲ စွဲမယ်ဟေ့ 
၀က်သားကို နယ်ပြီး ခဏနှပ်ထားရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ၀ါးတန်းလမ်း Dream ရှေ့က အဘချစ် ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင်က အူပိတ်နဲ့ ၀က်သားလုံးကောင်းတယ်။ ညနေ ၄နာရီလောက်မှ ဖွင့်တယ်။ တနင်္ဂနွေ ပိတ်တယ်။ ၀က်သားဒုတ်ထိုးနဲ့စားဖို့ အချဉ်ကတော့ ငရုပ်ဆီကို ငံပြာရည်အနောက် (ကြာညို့)အနည်းငယ်၊ သကြားအနည်းငယ်ထည့် ပါ။ ကြိုက်တတ်ရင် သံပုရာသီးကို အရည်ညှစ်ထည့်ပါ။
ဝက်နားရွက်ပြာဖြစ်လို့ မစားရဲပါဘူးဆိုမှ ရွှေအိမ်ဆူနော် အဲ မှားလို့ ရွှေအိမ်စည် နော်- ဟင်းးးးးးးးးးးးး
ဝက်မျိုးဖြုတ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်ရွှေအိမ်စည်ခင်များ ဝက်သားဒုတ်ထိုးအမယ်များထဲက အရိုးနုဆိုတာကို ကျနော်တို့ဆီက ဆိုင်တွေမှာ ရှာမတွေ့ပါ။ ဝက်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကဖြစ်သည်ကို သိလိုပါသည်။။
အရိုးနုကတော့ ၀က်နားရွက်က အရိုးနုလေးက တယ်စားကောင်း….
အ၇မ်းကြိုက်တဲ. ၀က်သား ဒုတ်ထိုးလာပြီ ဟီးးးး
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အသီးအနှံတွေ ဥပမာ မုန်လာဥလို ကြောင်လျှာသီးလို အစရှိတဲ့
ဘကြီးတေးဘဲ တွေကို ချဉ်ပတ်စိမ်နည်းလို့ခေါ်မလား ချဉ်ဖတ်ထည့်နည်းလို့ခေါ်မလား
<img src="” alt=”နာနတ်ပွင့်” />
နာနတ်ပွင့် ကို Star Anise လို့ခေါ်ပါတယ်။
.. အမှတ်တရ.. မှတ်သွားလောက်အောင်.. သတင်းစာထဲထည့်လိုက်မှနဲ့တူတယ်..။
လာမယ်ခဏစောင့် ဘယ်လိုပြရမှာလည်း..ကောမက်မှာပုံထဲ့ ရလား..့ကျနော်မသုံးတတ်သေးဘူး
သူငယ်ချင်းတွေက အမြဲ ကြွားတယ် ငါက ၀က်သား ဒုတ်ထိုး ၁၀၀၀ ဖိုး စားတယ် ၂၀၀၀ ဖိုး စားတယ် စသဖြင့်…
သူတို့ ပြောတာ အားကျလိုက်တာ.. တခါတော့ စားမယ် ဆိုပြီး ၀င်စားတာ ၁၀၀၀ ဖိုးတောင် မပြည့်ဘူး ၈၀၀ ဖိုး ထက် ပို မစားနိုင်ဘူး။
အိမ်ပြန်တော့ ရင်တွေ ပြည့်လိုက်တာ.. နေလို့တောင် ကောင်းဘူး။
အဲတာဆိုရင်တော့ ဆူးက နွယ်ပင့်ကိုတောင်မမှီတော့ဘူး
နွယ်ပင်ဆို တစ်ခါစားရင် အနည်းဆုံး 2000 ပဲ
တစ်ခါများ နှစ်ယောက်အတူသွားစားတယ် 6000 ကျော်သွားလို့
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ပဲ လုပ်စားဖြစ်ပါပေါ့လား။ အခုမနက် ၀က်သားတုတ်ထိုးကို ကြာဇံကြော်လေးနဲ့ သုတ်စားရင်း ပန်းကန်ကိုင်ပြီး ရွာထဲဝင်တာ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ တုတ်ထိုးနဲ့ တိုးတာပဲ။ ၀က်သားနယ်ရင် ခရုဆီလေးပါထည့်နယ် အရသာပိုကောင်းပါတယ်။ အသည်းကိုတော့ တခါတည်းထည့်မပြုတ်နဲ့ မာပြီး ခါးသက်သက် ဖြစ်သွားတတ်တယ် အစာပလာတွေနဲ့ နှပ်ထားပြီး အိုးချခါနီး ၁၀မိနစ်လောက်အလိုမှာထည့် ပိုကောင်းပါကြောင်း။ ဦးကြောင်ရေ အရိုးနုက နားရွက်နဲ့ လည်ချောင်းမှာပါပါတယ်။ ကိုအောင်ပုရေ အချဉ်တည်တာ အလွယ်လေးပါ ပုလင်းတလုံးထဲကို ဆန်ဆေးရေ ဦးရည်ထည့် ဆားထည့် ထမင်း နှစ်ဇွန်းလောက်ထည့် နနွင်းမှုန့်လေး နဲနဲထည့် အချဉ်တည်ချင်တဲ့ အသီးအရွက်ထည့် နေပြထား ၃ရက်ဆိုချဉ်ပါပြီ။ မှီကတော့ ပဲပင်ပေါက်ကို အမြဲလိုလို အချဉ်တည်ပြီး တို့စား၊ သုတ်စားပေါ့။ ရွှေအိမ်စည် ပင်ပန်းမှာ စိုးလို့ ကိုယ်စားဖြေပေးတာ။
စမ်းချောင်း ပဒုမ္မာကွင်း La Belle ရှေ့  က ၀က်သားတုတ်ထိုး…ဒီဆိုင်များကတော့ ကျမက သုတေသနပြုထားသလောက်ဘဲဗျ..လာစားဘူးပါတယ်…သံလမ်းမှာအမျိုးတွေရှိတယ်လေ..
သူများလို ဝက်သားဒုတ်ထိုးနည်း မတတ်တော့ တတ်တာလေး ဝင်ပြီး ဆရာလုပ်လိုက်ဦးမယ်။ မှီ ပြောတဲ့နည်းအပြင် နောက်နည်းတမျိုးနဲ့လည်း အချဉ်စိမ်လို့ ရသေးတယ်။ အချဉ်စိမ်ချင်တဲ့ အရွက်ကို ဆားနဲ့နယ်။ အရွက်နွမ်းရင် အရည်ကိုသွန်ပစ်ပြီး ဆန်ဆေးရည် ထဲထည့်စိမ်။ နောက် ၁-၂ ရက် နေရင် စားလို့ရပြီ။
အစားအသောက်မီးလိုတောက် ။ …..ကျနော်လည်းပါတယ်ဟီးဟီး
အိမ်မှုသိမ်းထုပ်ချက်ပြုတ်သေချာတဲ့ ..မိုက်ကယ်ပု..သို့ 
ကိုပေါက်ရယ်….ဒွနေ့ တော့နတ်မင်းကြီးကအငွေ့ ဘဲရှူ့ …
Thanks,Shwe Aein si,
I also life this kind of pork since 8 years ago,I prefer Mandalay to Yangon cos’ it is more delicious.Thanks for sharing this photo…,it makes me……:)
I am worring about stree-vendor( wet thar htoke htoe thal) whether washing or not “his hand” after going toilet. And, if not……………..?